Amazon KindleeBookstore တရုတ် မှထွက်ခွာ မည် - Pandaily
Amazon KindleeBookstore တရုတ် မှထွက်ခွာ မည်
Jun 02, 2022, 16:53ညနေ 2022/06/02 23:26:55 Pandaily
Amazon သည် လာမည့် နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Kindle e-book ဆိုင် ကိုပိတ် လိမ့်မည်သူ့ရဲ့ တရားဝင် WeChat အကောင့် မှာ တင် ထားတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကြာသပတေးနေ့ ။
Kindle China E-Bookstore သည် လာမည့် နှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှစ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချ ခြင်းကို ရပ်တန့် သွား လိမ့်မည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် နောက် နှစ်တွင် ဖောက်သည် များသည် ၀ ယ် ထားသော မည်သည့် စာအုပ် ကိုမဆို ဆက်လက် ဒေါင်းလုပ် ဆွဲ နိုင်သည်။
ကြာသပတေး နေ့က ပြုလုပ်သော ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Gao Feng က “Amazon က တရုတ် နိုင်ငံမှာ e-book လုပ်ငန်းကို ပိတ်ပစ် လိုက်ပြီ ဆိုတာကို ငါတို့ သတိပြုမိ ခဲ့တယ်။ ဓမ္မ ဓိ ively ္ဌ ာန် ကျကျ ပြောရ လျှင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာ နေသော ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအ ကြီး ဆုံး စားသုံးသူ စျေးကွက် အနေဖြင့် တရုတ်သည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ အဆင့်မြှင့်တင် မှုသည် အမြန်နှုန်း လိုအပ် သည်ကို တွေ့မြင် သည်။ နိုင်ငံခြား ရန်ပုံငွေ ရရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအပါအ ၀ င် စျေးကွက် အမျိုးမျိုး အတွက် စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုချိန်ညှိ ခြင်းသည် စျေးကွက် စီးပွား ရေးတွင် ပုံမှန် ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ “
Gao က ဆက်ပြော သည်မှာ “ခြုံငုံ ကြည့်လျှင် တရုတ် နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအတွက် ခိုင်မာသော ဆွဲဆောင်မှု ကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီ လအထိ တရုတ် နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအတွက် ယွမ် ၄ ၇၈. ၆၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၁. ၇ ဘီလီယံ) ကိုအသုံးပြု ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၀. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ် တွင် အမေရိကန် ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုသည် ၅၃. ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တရုတ် နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာအနှံ့ မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများကို ကြို ဆိုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်းပြည် တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုဆက်လက် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။”
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Amazon Chinese ဝက်ဘ်ဆိုက် သည် ပြည်တွင်း Kindle e-bookstore ကို တရားဝင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး သုံးစွဲ သူများအား တရုတ် အကြောင်းအရာ များ ကိုတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူ ခွင့်ပြုသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အစ တွင် စတိုး သည် သောင်း နှင့်ချီ သော e-book များ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုနှင့်အတူ စာဖတ် ခြင်း အလေ့အထ များမှာ များစွာ ပြောင်းလဲ သွားပြီး e-book အချိုးသည် တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးပွား လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တရုတ်သည် Kindle ပစ္စည်းကိရိယာများ ရောင်းချ မှုအတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စျေးကွက် ဖြစ်လာသည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံတွင် Kindle ရင်ဆိုင်နေရ သော ပြိုင်ဆိုင် မှုသည် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက် နေသည်။ တရုတ် စျေးဝယ် ပလက်ဖောင်း များဖြစ်သော JD, Dangdang နှင့် WeChat နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာ ဆော့ဖ်ဝဲ များသည် ကိုယ်ပိုင် e-book စီးပွားရေး ကိုစတင်ခဲ့သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် Kindle သည်တရုတ် ဈေးကွက် မှ နောက်ဆုံး မှထွက်ခွာ တော့ မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ် ခဲ့သည်။ Kindle ရဲ့ တရားဝင် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ကတော့ အဲသည်လို အကြောင်းကြားစာ မျိုး မရ ရှိခဲ့ ဘူးလို့ အဲသည် အချိန်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ သုံးစွဲ သူများသည် Kindle ကိုပုံမှန် အသုံးပြုပြီး ရောင်းချ ပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှု ရနိုင်သည်။ သို့သော် Kindle ၏တရားဝင် Taobao ဆိုင် ကိုပိတ် လိုက်သည်။ JD.com ရှိ အထင်ကရ စတိုးဆိုင် များနှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စတိုးဆိုင် များအားလုံး လည်း ပိတ်ထား သည်။ ဤအချက် များအားလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Kindle ၏စီးပွားရေး ရပ်တန့် တော့ မည့် လက္ခဏာ များဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Amazon က Kindle သည်တရုတ် ဈေးကွက် မှ နုတ်ထွက် သည်ဟူသော ကောလာဟလ များကို တုံ့ပြန် ခဲ့သည်